GOOBAHA DAGAALKA: Saddexda Meelood Ee Ay Ku Kala Adkaan Karaan Man United & Man City, Lixda Ciyaartoy Ee Dagaalka Ugu Weyn Dhex Mari Doono Iyo Goobaha Laga Go'aamin Doono Natiijada - Gool24.Net
GOOBAHA DAGAALKA: Saddexda Meelood Ee Ay Ku Kala Adkaan Karaan Man United & Man City, Lixda Ciyaartoy Ee Dagaalka Ugu Weyn Dhex Mari Doono Iyo Goobaha Laga Go’aamin Doono Natiijada
April 24, 2019 Saed Balaleti
Ciyaarta go’aamin doonta kooxda horyaalka Premier League ku guuleysanaysa ayaa waxay Manchester United kusoo dhoweynaysaa gareenkeeda Old Trafford naadiga ay deriska yihiin ee Manchester City.
Ole Gunnar Solskjaer ayay wiilashiisu maryaha u dhigan doonaan sidii ay uga soo kaban lahaayeen bahdilaaddii Everton u geysatay Axaddii ee ay 4-0 kaga adkaatay gudaha garoonka Goodison Park, laakiin Man City oo iyaduna 1-0 dirqi ah kusoo dhaaftay Tottenham Salaasadii ayaa ogsoon in tallaabada kaliya ee ka xigta inay ku guuleystaan horyaalka Premier League inay tahay kulankan oo ay Man United kaga adkaadaan.
Siddeedii ciyaarood ee ugu dambeeyey Man United waxa laga adkaaday lix ka mid ah, laakiin markan ma ogolaan doonto inay mar kale madaxa hoos u foorariyaan oo si dhayal ah ay City kaga qaadato saddex dhibcood oo ay iyaguba uga baahan yihiin inay ka mid noqdaan afarta naadi ee xili ciyaareedka dambe ka qayb-geli doona Champions League.
Sidaas oo kale, City ayaa guul-darro amaba barbar-dhac ay ku gasho Old Trafford, waxay ku waayi doontaa horyaalka xili ciyaareedkan oo ay Liverpool laba dhibcood ka horreyso xilli ay saddex ciyaarood oo kali ah hadhsan yihiin.
Pep Guardiola oo xili ciyaareedkii hore kooxdiisa kula guuleystay Premier League, ayaa sannadkan waajahaya tartan adag oo kaga yimid Liverpool, oo ay iska laallaadi doonaan illaa ciyaarta ugu dambaysa.
Manchester United iyo Manchester City oo isku hal toddobaad ka wada hadhay Champions League, waxay dagaal kasta oo suurtogal ah jilbaha iskugu dhigan doonaan Old Trafford, halkaas oo jamaahiirta Liverpool ay si dhow ula socon doonaan maadaama natiijadu saamayn ku yeelanayso hammigooda xili ciyaareedka.
Haddaba, shabakadda ciyaaraha ee Cadalool waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa saddex goobood oo dagaalka ugu weyn uu ku dhex mari doono Manchester United oo garoonkeeda joogta iyo Manchester City oo safar gaaban ugu tegaysa dariskeeda.
Dagaalkan waxa uu ka dhici doonaa saddex goobood, laakiin waxa uu si gaar ah u taaban doonaa oo ciddiyaha iskula tegi doona lix ciyaartoy oo saddexba koox ka socdaan.
Iyadoo uu maqan yahay ‘Farshaxankii’ reer Belgium oo kulanka Manchester derby ku seegaya dhaawac, Manchester City waxay khadka dhexe keeni doontaa Ilkay Gundogan oo isku dayi doona inuu buuxiyo booskiisa, waxayse si toos ah iskaga hor iman doonaan Paul Pogba oo ah hoggaamiyaha laysku waafaqsan yahay ee Man United.
Pogba waxa uu ka mid yahay xiddigaha khadka dhexe ee ugu hal-abuurka badan horyaaalka Premier League, laakiin bandhiggiisu maaha mid qani ku ah wax kasta oo looga baahan yahay, gaar ahaan kulamada waaweyn.
Hore ayuu u caddeeyey awooddiisa gool-dhalinta iyo gool-samaynta iyo waliba qaabka hore ee kubbad-dhisidda ka hor inta aanay goolka kooxda cadowgiisa kusoo dhowaanin, waxaanu taas kusoo bandhigay garoomada intii uu cusbaa tababare Solskjaer, laakiin muddooyinkan dambe hoos u dhac ayaa yimid.
Xiddiga reer France ee Pogba oo kaashanayey Alexis Sanchez, waxay ahaayeen nimankii go’amiyey natiijada ciyaartii waqtigan oo kale sannadkii hore dhex martay Manchester City ee ka dhacday Etihad Stadium, waxaana looga baahan yahay inuu mar kale ku celiyo, laakiin waxa hortiisa taagan Gundogan oo isaguna kubbad-Jarmal lasoo bixi doona.
Midka ku guuleysta dagaalkan, waxa kooxdiisu ay khadka dhexe ku yeelan doontaa awoodda sare, waana halka ugu dambayn laga go’aamin doono ciyaarta.
jiprl sayz says:
ciyaartani inzha allh wxy ku dhmmnysaa 3-2 oo manchester united ayaa ku badinysa